“आ’खिर किन,यस्तो भनिन् बालिका, खड्का,ले शेरधन लाई, सबैको अगाडी” – Gorkhali Dainik
April 22, 2021 2207
“बालिका खड्का ले भन्छिन् मलाई बि हे गर्छु भनी अहिले सम्म भ्रममा राखेर मसँगै ब,स्ने भेट्ने गरेको उनले ,खुलाएकी छिन्। पूरा भिडियो हेर्नुहोला तल थिचेर।।? पेजलाई लाइक र follow पनि गरीदिनु होला हामीले भिडियो तल समाचारको अन्त्य मा राखेका छौ।”
“नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले चार महिनापछि अवकासमा पाउँदैछन् । थापाको नियमित कार्यकाल आगामी भदौ २४ मा सकिँदैछ ।”
“थापाको कार्याकाल सकिने भएपछि नयाँ प्रधानसेनापति को बन्छ ? भन्ने आम चासोको विषय रहेको छ । बरियताक्रम अनुसार हालका बलाधिकृत प्रभुराम शर्मा प्रधानसेनापति बन्ने सम्भावना देखिन्छ । शर्मा प्रधानसेनापति बन्ने लाईनमा छन् । सोहीअनुसार आन्तरिक तयारी जुटेको बताइन्छ ।”
“प्रधानसेनापति बन्ने लाइनमा रहेका अर्का रथी ईश्वर हमाल हाल फोर्स कमाण्डरका रुपमा मिसनमा कार्यरत छन् । उनी रथीमा बढुवा भएदेखी नै अनडफ मिसेनमा फोर्स कमाण्डरका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । त्यसैले शर्मालाई प्रधानसेनापति बन्न सहज रहेको बताइन्छ ।”
“प्रधानसेनापतिको लाईनमा रहेका शर्मा २१ बेसिकका सैनिक अधिकृत हुन । उनले भारतबाट नेशनल डिफेन्स कोर्स (एनडिसी) गरेका छन् । शर्मा २०७७ बैशाख १४ मा रथीमा बढुवा भएका थिए ।प्रधानसेनापतिले एक महिना पहिला विदा लिने परम्पराअनुसार उनी साउन २४ मा विदामा बस्नेछन् ।”
Prevआज आएको भि,षण हावाले रुखको हागा भा,चि,ए,र ला,ग्दा ८ बर्षीय बालकको मृ,त्यु
Nextकाँग्रेसका पूर्व सभापतिको रुखले किचेर मृत्यु